लोमो समय राखेको आलुमा रहेको पानीको मात्र नष्ट भएसँगै आलु चाहुरिन पुग्छ । जसलाई विउको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आलुलाई धेरै समय राखेरपछि त्यो चाहुरिन्छ, त्यसको टुसा उर्मन थाल्छ । यसैलाई बिऊको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो आलु सेवन गर्दा हानी पुग्छ । यस्तो चाउरी परेको आलुको सेवन गर्दा शरीरमा विषाक्त पदार्थ प्रवेश गर्छ ।
बजारमा खरिद गरेको बेला होस् वा सब्जी बनाउने बेला, बोक्रामा हरियो हुँदै गएको आलु सेवन नगरौं । लामो समय राख्दा पनि आलु हरियो हुँदै जान्छ । यस्तो आलुको हरियो भाग काटेर प्रयोग गर्नुपर्छ । आलुको हरियो भागमा सेलेनाइन विषाक्त पदार्थ हुन्छ ।
टुसा अाएको आलु
अनेकौं रोगबाट अंगुरले जोगाउँछ....
कतै कागतीका बोक्रा फ्याक्ने गर्नु भएकाे त छैन? हुन्छ...
आज कस्तो रहला तपाईंको दिन ?
एमालेमा ‘अनौठो घटना’ : ओलीविरुद्ध आज सांसदहरूको सामूहिक राजीनामा आउँदै
यो साता कुन राशिको भाग्य कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
संक्रमितलाई सघाउन आजदेखि ‘हेल्लो डाक्टर’ सेवा शुरू
चीनबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याइने
यी २६ सांसदलाई कोरोना संक्रमण [नामावलीसहित]
कोरोना संक्रमितको शव मापदण्ड विनै अन्त्येष्टि गरेपछि एकैगाउँमा थप २१ जनाको मृत्यु
गाउँपालिकाका सबै गाडी संक्रमित बोक्न प्रयोग गर्ने निर्णय